Xbox-ka soo socda wuxuu diirada saari doonaa heerka xaddiga iyo waqtiyada culeyska - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Xbox soo socda wuxuu diirada saari doonaa heerka xaddiga iyo waqtiyada culeyska
Muxuu qarniga soo socda ee guriga ku habboon u keydsan karaa marka laga reebo kordhinta waxqabadka? Xbox-ka soo socda waa in xaalad kasta diiradda la saaraa, gaar ahaan, heerka xaddiga iyo waqtiga la soo dejinayo.
At E3 2019 toddobaadyo ka hor, Microsoft waxay xaqiijisay inay ka shaqeynayaan jiilka xiga ee qalabka wax lagu qoro Xbox. Waqtigaan la joogo, wax yar ayaynu wax ka naqaan carqaladdan cusub marka laga reebo in shirkadda Redmond ay ka shaqeyso qaabkeeda. Laakiin waxay umuuqataa in mashiinku leeyahay processor ku habboon AMD, RAM GDDR6 iyo jiil cusub SSD. Waxa loo tixgelinayo waxqabadka aad iyo aad u sarreeya marka loo eego moodooyinka hadda jira. Ciyaartoyda wax yar kama fileynin. Laakiin Microsoft ayaa u muuqda dooneysaa inaad diirada saarto dhinacyo gaar ah.
Xbox-ka soo socdaa wuxuu doonayaa inuu diiradda saaro heerka xaddiga iyo waqtiyada culeyska
Qeybahaas oo kale, jiilka xiga ee Xbox wuxuu ka fiicnaan karaa afar jeer Xbox One X. Su'aal ay weydiisay GameSpot, Phil Spencer, agaasimaha waaxda 'Xbox' ee Microsoft, ayaa dhawaan shaaca ka qaaday qaar ka mid ah faahfaahinta cusub ee ku saabsan qalabka. Gaar ahaan dhinacyo ka mid ah arimihii waaweynaa ee Mareykanku go'aansaday inuu diiradda saaro. Kuwani waa heerar raaxo leh iyo waqtiyo raritaan ciyaaraha ah. Maxaa u siiya ciyaartoy khibrad ciyaar oo jilicsan iyo wax barid badan oo saameyn leh. "Waxaan u maleynayaa inaan si dhab ah u dooneynno jiilkaan soo socda inay diiradda saaraan heerka jirdhiska iyo ciyaarta ciyaarta. Hubso in cayaaruhu ay si xamaasad leh u rarnaadaan, hubi in ay ku tooganayaan heerka ugu sarreeya ee suurtagalka ah. Sidoo kale waa annaga oo horumarinay Windows si aan u aragno dhammaan shaqooyinka laga qabtay PC iyo waxa soo saarayaasha soo saaraan. Dadku waxay jecel yihiin cayaaraha 60 fps, orodka ku dhex jira 4K ee 60 fps waxay noqon doonaan yool aad noogu muhiimsan."
Tani waa in lagu siiyaa khibradaha ciyaarta ugu raaxada badan uguna xiisaha badan ciyaartoyga
Heerka qaab-dhismeedka iyo xallinta cayaaraha runtii waxay ahaayeen dhibco aad u muran badan markii Xbox One uu yimid suuqa. Ciyaartoy badan ayaa isbarbar dhigaya PS4 oo markan la joogo, qalabka korantada ee Sony ayaa aad ufiicnaa. Waqtigaan la joogo, qofna ma oga goorta qarnigan soo socda ee Suuqa la suuq geyn doono laakiin shaki kuma jiro inay ciyaartoydu durbaba sugayaan. Sida console kasta, shirkadda Redmond waxay u ciyaareysaa si weyn waxayna sameyn doontaa wax badan oo ay ka qabato inay ku garaacdo masraxa ninka ay xafiiltamaan ee had iyo jeer.
Apex Legends: Iron Crown, habka kaliya ee ciyaarta ayaa la bixin karaa labo toddobaad
Qeybta Splinter: Ubisoft waxay diyaarineysaa soo celinta shatiga
Shenmue 3: Nooca tijaabada ah waxaa lagu dhawaaqay bisha Sebtember PC
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/la-prochaine-xbox-se-concentrera-sur-le-frame-rate-et-les-temps-de-chargement-325220